Ukujongwa okubonakalayo kwiihambo zabaThengi beHolide | Martech Zone
Ukujongwa okubonakalayo kwiihambo zabaThengi beHolide
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 7, 2018 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 7, 2018 Douglas Karr
Ukuba awukabhalisi okwangoku, ndingacebisa kakhulu Cinga ngeGoogle indawo kunye neeleta zeendaba. UGoogle ubeka izinto ezimangalisayo ukunceda abathengisi kunye namashishini ukuba akhulise ishishini labo kwi-intanethi. Kwinqaku lakutshanje, benze umsebenzi omkhulu ekuboneni iihambo ezi-3 eziqhelekileyo zabathengi ezibonwayo ukuqala ngeLwesihlanu omnyama:
Indlela eya kumthengisi ongalindelekanga -Ukuqala ngokukhangela okushukumayo, uhambo lubonelela ngengqondo kwinto ethile ethengisayo kwi-Intanethi.
Isigqibo sokulungisa okanye sokutshintsha -Omnye umntu ukhangela kwidesktop kwaye emva koko ahambe ngefowuni, kunye nokunxibelelana neentengiso ukufikelela kwisigqibo sokuthenga.
Imfuno yokudlala -Umdlali weqonga wenza uphando ngokuthenga kwakhe kwikhonsoli elandelayo, esenza uphando ngeselula nakwidesktop, etyelela iisayithi zabathengisi kunye neendawo zeshishini ukuphanda ngokuthenga kwakhe okulandelayo.
UGoogle ubonelela ngezinto ezithile zokuthatha, kubandakanya ivolumu yophando abathengi abayenzayo, ukuthembela kwiselfowuni, kunye nenyaniso yokuba aba bathengi bajolise kwizipho.
Ndingathanda ukuba ugxile kwizinto ezimbalwa ekungafanelekanga ukuba ziqwalaselwe:
Abantu baxhamla phakathi kwezixhobo kunye nama-mediums Kutshanje ndithenge iPlayStation entsha. Bendikwi fowuni yam kancinci ngelixa ndibukele umabonwakude, ndifunda uphononongo kwaye ndijonga iinyanda. Ke xa ndihleli edesikeni yam, bendijonga iividiyo kwaye ndibukele iividiyo zokujonga kwakhona. Ndindwendwele iBestBuy amaxesha ambalwa ukuze ndibone abanako. Umhlobo wam ngumdlalo omkhulu, ke ndiye ndancokola naye ngeFacebook ndenza isigqibo malunga nento endiza kuyithenga. Ekugqibeleni, ndifumene ixabiso elikhulu ndaza ndalithenga nge-Intanethi ngeWal-mart. Ke .. iselfowuni, idesktop, ukukhangela, intlalontle, uphononongo kunye nokuthengisa konke kudlale indima kuhambo lwam.
Abantu bachitha ixesha elininzi bephanda - Olu hambo alukho kwiseshoni enye, ziphelile iiveki neenyanga. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ii-cookies ziyaphelelwa, amaphulo ayatshintsha, iziphumo zophendlo ziyahamba… lonke elixa umthengi ephanda isigqibo sokuthenga esilandelayo. Ukuze imveliso yakho okanye inkonzo ihlale ibonakala, kufuneka ungagungqi ekugcineni kubonakala kwaye kubalulekile kubo.
Abantu badla itoni yophando lomxholo -Andikwazi nokukuxelela ukuba ndifunde kangakanani, ndibukele, kwaye ndixoxa njani ngaphambi kokuthenga inkqubo yam. Ndiza kukuxelela ukuba isigqibo sam sokuthenga sibhalisiwe njengoko ndiqhubeka nokuphanda, nangona kunjalo. Ekugqibeleni ndathenga iikiti zePro kunye neVR ngePlayStation yam emva kokubona uphononongo kunye nokubukela iividiyo malunga nobuchule. Ndayifumana ke le nkqubo, ndaya ezivenkileni kwakhona ukufumana izixhobo ezingaphezulu! Umxholo awuqhubanga nje isigqibo sam, Kwakhona kwaqhuba ukuthengisa okongeziweyo.
Nantsi infographic epheleleyo, Ngaphakathi kuhambo lokuthenga lwabathengi abathathu bemihla ngemihla:
tags: umthengiukuthenga umthengiuhambo lwabathengiReviewsUphando lwezoPhandoisigqibo sokuthengacinga noGooglewalmart
Elona Cebiso liSebenzayo liQhinga lokuThengisa leMillenial